အိုင်ဖုန် းအိုင်ပက် တွေ ပျောက်ရင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အိုင်ဖုန် းအိုင်ပက် တွေ ပျောက်ရင်
အိုင်ဖုန် းအိုင်ပက် တွေ ပျောက်ရင်
Posted by thar ag on Jun 28, 2012 in Copy/Paste | 12 comments
အခုတလောလူတွေ တော်တော်များများ တန်ဘိုးနည်းဖုန်းတွေကလဲ ပေါ်လာသလို ဘဲ တန်ဘိုးကြီး ဖုန်းတွေ ဖြစ်တဲ့အိုင်ဖုန်းတို့ အိုင်ပက်တို့ခေတ် စားလာတော့ ပျောက်တာတွေ ရှတာတွေကလည်း များလာတဲ့အတွက် ဒါလေးတွေကို သိထားသင့် တယ်လို့ထင်လို့ပြန်လည်မျှ ဝေပေးချင်တာလေးတခုပါ ကိုစံပီးတင်ပြ ထားတာလေးကိုmg ပရိတ်သတ် ကြီးအတွက်တင်ပြပေးလိုက်ပရစေလို့ ့ဒီလိုလေးပါ iphone/ipad/ipod ပျောက်ရင်၊အခိုးခံရရင် စိတ်မပှုပါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကြည့်နေကျ James Bond (007) movie ထဲ ကလိုမျိုး ရန်သူဘယ်ရောက်နေပြီးလဲဆိုတာကို James Bond (007) က ပစ္စည်းလေးတခု ထည့်ပေး လိုက်တာနဲ့ မြေပုံမှာ ပြသလိုဘဲ။ အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Iphone/ipad, Ipod မှာ ရပါပြီး မနေ့ကဘဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူရဲ့ Iphone 4s ကို shopping centre မှာ ပျောက်သွားတာ နဲ့ ကျွန်တော်ကို ဖုန်းဆက်တယ် ဒါနဲ့ဘဲ ကျွန်တော်လဲ သူ့ရဲ့ Iphone မှာ သုံးတဲ့ Apple ID and password ကို
အသုံးပြုပြီး ဒီ https://www.icloud.com/#find မှာ ဝင်ပါပြီးတော့ Find My iphone ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ။
ဒီအခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ပျောက်သွားတဲ့ Iphone က ဘယ်မှာရောက်နေလဲ ဆိုတာကို မြေပုံပေါ်မှာ ဖော်ပြပေး
မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ သူခိုးသွားတဲ့ လူဆီကို ကိုယ်က အိမ်တာရာရောက် လိုက်တောင်းလို့ ရတာပေါ့။ ပြီးတော့ အောက် ကပုံထဲမှာ မြင်တဲ့အတိုင်းဘဲ ကိုယ့်က သူ့ဆီကိုလဲ စာပို့လို့ရတယ်။
ဥပမာ -အကယ်၍ ကိုယ်က သူငယ်ချင်း အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုရင် သူဆီကို ဒီ online ကနေဘဲ
Message ပို့လို့ရပါတယ် ဒီအပြင် Lock လဲလှမ်းလုပ် လို့ရပါတယ် ပြီးနောက် နောက်ဆုံး ပြန်မရတော့
အဆိုးဆုံးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ I-devices အထဲထဲက Data တွေက တအားကိုအရေးကြီးပြီး
သူများမသိစေချင်ဘူးဆိုရင်လဲ Remote wipe ကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Idevices ထဲက data နဲ့ information
တွေ ကိုလှမ်းဖျတ် လို့ရပါတယ်။
တွေ ့ရင် တော့လဲပြန်ရတာပေါ့လေ မတွေ့ရင် တော့လဲ အသစ်ဝယ်လိုက်ပါ ပျောက်သွားရင် တော့ဒါလေးနဲ့ စမ်းရှာ ကြည့်လိုက်ပါ ပြန်ရဘူးတာတွေ ရှိနေလို့ပါနော်
i Phone, i Pad တွေကို ပိုက်ဆံရှိလည်း မဝယ်ပါ၊ ဘာလို.လဲဆိုတော့ Device ရွေးလွန်းသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ Sim Card ကို ချိုးပြီး ထည့်ရသည်။ ဖုန်းပျက်သွားလျှင် Sim Card ကို တခြား ဖုန်း ဟန်းဆက်တွင် သုံးမရတော့၊ နောက် i Phone တစ်လုံးသာ ဝယ်ရန် ရှိတော့သည်။
ဝယ်မှ ပြန်လာပြီးထပ်ဖတ်မယ် အခုတော့——-
အိုင်ဖုန်း ၊ အိုင်ပက် ဆိုတာ ဂျီးဒွေဂ၊ အဲ့ဒီထဲမှာ ရေတွေ ငါးတွေ ရှိသလားဗျ
မမအညာသူရေစနိုးလည်းပါမယ် စနိုးလည်းပိုက်ဆံစုမယ် စနိုးနဲ့တူတူစုမယ်လေ မမအညာသူကတနေ့ဘယ်လောက်စုနေလည်း စနိုးကတော့ တနေ့ 100စုနေတယ် ပြည့်ရင် မမအညာသူလည်းစနိုးဝယ်တဲ့ ipadကိုမျှဝေသုံးခွင့်ပေးပါ့မယ် ပိုက်ဆံပြည့်အောင်ဝိုင်းစုပေးနော်။
ကျွန်တော် သိတာလေးတခုပြောမယ် ( ထင်တယ်ဆိုတာက ပိုမှန်မယ်)အဲ့လို ရှာတဲ့ အတွက် ပေ ၄ဝ ပေ ၅ဝ လောက် အတွင်းတော့ အနီးစပ် ဆုံးရမယ် မက်ဆေ့ပို့လို ့ရတယ်ဆိုတာလဲ ဟုတ်ပါတယ် မျှ ဝေပေးတဲ့ thar ag ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါ ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ပျောက်သွားရင်တော့ပြန်ရ ဖို ့ခက်ခဲမယ်ထင်ပါတယ် အဲ ဒါ အလုပ်လုပ် ဖို့အတွက် က ဖုန်းရဲ ့location services ကိုလည်း on ထားရ ဦးမယ် အင်တာနက် လိုင်းပေါ် မှာ လဲ ရှိနေရ မှာ ဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံ မှာ တမိနစ်နှစ်ကျပ် သို့မဟုတ် လေးကျပ် နဲ့၂၄ နာရီ အွန်လိုင်း ဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းမရှိသလောက်ရှားပါတယ် နိုင်ငံ ခြားမှာလို unlimit ယူထားတဲ ့ဖုန်းအတွက်ဘဲပိုအဆင်ပြေ ပါလိမ့်မယ် ရီ စရာလေးအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကလူတွေ ကိုအကြံပေးချင်တာက မိမိ ဖုန်းမပျောက်ခင်လေးသတိထားပြီး အင်တာ နက် service ကို on ထားကြ ပါ လို ့ကံ ကောင်းလို့ လိုင်းလဲ တက် နေတဲ့အချိန်ဆိုပြန် ရှာ လို့ ရ. နိုင်ပါတယ်
Monarch ပြောတာ နည်းလမ်းကျပါတယ်။ပိုပြည့်စုံအောင် ကိုဂီတို ့ကိုဝတုတ်တို ့
ကျုပ်တို့လည်း အိုင်ဖုန်းတို့၊ အိုင်ပက်တို့ဆိုတာ
ကြားပဲ ကြားဖူးတာ ..
ဝယ်သုံးဖို့ဆို ရိုးရိုးဖုန်းလေးတောင် ဝယ်နိုင်သေးပါဘူး .
သို့ပေသိ ခုအင်ဖော်မေးရှင်းအတွက်တော့ ရှဲရှဲပါနော့ ..